Ndi Mgbasa ozi mmemme na-azụrụ igbu aha gị? | Martech Zone
Etchọta mbipụta adịghị mfe dị ka ọ dị. Lelee akwụkwọ ọ bụla dị mkpa anya, ị ga-ahụ ọkara iwe iri na abuo nke na-arịọ ndị na-agụ akwụkwọ ka ha laa. Ha na-emekwa ya. Agbanyeghị, ịkpata ego bụ ihe ọjọọ dị mkpa. Ma ọ masịrị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, achọrọ m ịkwụ ụgwọ ndị a na-akwụ ụgwọ ebe a ka m wee nwee ike ịkwado nkwado na mgbasa ozi nke ọma.
Otu mpaghara anyị chọrọ iji meziwanye ego na akwụkwọ ozi email anyị. Ugbu a, anyị na-enye mgbasa ozi abụọ na nkwado akwụkwọ ọcha na ngwakọta. Obi dị m ezigbo ụtọ na akwụkwọ akụkọ ahụ - nke injin anyị rụpụtara iji hụ na ha metụtara ọdịnaya anyị na-ewepụta. Ozi mgbasa ozi email, agbanyeghị, bụ nnukwu ndakpọ olileanya. N'agbanyeghị mkpesa a na-eme ụlọ ọrụ ahụ ọtụtụ oge, akwụkwọ akụkọ m na-ebikarị ntutu isi mgbasa ozi. Ha na-na horrid… mgbe Bilie na ihe animated gif nke ụfọdụ gal ma ọ bụ Ihọd na-aga si nkwọcha a zuru isi nke ntutu.
Companylọ ọrụ ahụ mesiri m obi ike na mgbasa ozi ga-agbanwe mgbe oge dabere na pịa-throughs, n'oge nke ha ga-aka mma nye onye debanyere aha. Nke ahụ emebeghị, ya mere m Anam Udeme mgbasa ozi n'ime izu ole na ole sochirinụ. Arụsiri m ọrụ ike ike iji wuo ụlọ ọrụ ndebanye aha na-arụ ọrụ nke na-anabata ọdịnaya anyị nwere inye, na ịhapụ ha na mgbasa ozi dị egwu erughị ego ole anyị na-enweta site na ntinye ego. Ana m agafere onye na-ere ahịa nke na-enye nkọwapụta ụdị ọrụ onwe onye, ​​ịde aha ọcha, yana ndenye aha ndị ọzọ. Amaara m na agaghị m enweta ego dị ukwuu site na iji aka na-ahọpụta mgbasa ozi, mana nke a agaghị m ewepụ aha ndị debanyere aha nke nyere m ikike ịbanye igbe mbata ha.
Ọ bụghị naanị m nwere nchegbu a. Onye isi ahịa ahịa (CMO) Council wepụtara akụkọ taa nke na-ekpuchi isiokwu ndị dị mkpa. Ọ na-etinye ajụjụ na uru na ntụpọ nke $ 40 ijeri usoro mgbasa ozi mmemme, ọkachasị ihe egwu nke mgbasa ozi ngosi dijitalụ nke pụtara n'akụkụ ọdịnaya adịghị mma. Akụkọ ahụ akpọrọ, Nchedo Aka Site na Ọrịa Ọdịnaya Dijitalụ: Ikpuchido Nkọwapụta Aha Nhọrọ Site na Nhọrọ Mgbasa Ozi Ọkụ, chọpụtara na 72% nke ndị mgbasa ozi akara aka na-azụ ihe mmemme na-echegbu onwe ha gbasara iguzosi ike n'ezi ihe na njikwa na nhazi ngosi dijitalụ
Budata Mkpuchi Mgbasa sitere na Ọrịa Dijitalụ Ọrịa
Ọ bụghị naanị ndị nkwusa ka ọ na-eche, kamakwa ndị mgbasa ozi na-enwewanye nchegbu ebe a na-etinye mgbasa ozi ha. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị na-azaghachi ahịa na-akọ nsogbu na ebe na otu esi elele mgbasa ozi dijitalụ, otu ụzọ n'ụzọ anọ ekwuola na ha nwere ihe atụ akọwapụtara nke ebe mgbasa ozi dijitalụ ha na-akwado ma ọ bụ na-esote ya iwe ma ọ bụ mebie ọdịnaya.
Ebumnuche nyocha ahụ iji nyochaa mmetụta nke ahụmịhe mgbasa ozi dijitalụ na nghọta ndị ahịa na ebumnuche ịzụta. Akụkụ nke usoro nchọpụta ọnwa atọ lere anya nchekwa nchekwa dijitalụ site na njirimara nke ndị ahịa wee chọpụta na ndị na-azụ ahịa na-ata ahụhụ ọbụlagodi ụdị akara ma ọ bụrụ na ha anaghị eji nyiwe mgbasa ozi tụkwasịrị obi ma ọ bụ were usoro dị ike iji chịkwaa iguzosi ike n'ezi ihe nke gburugburu mgbasa ozi ha. Nchoputa nke ndi n’ahia ihe banyere ya bu nke akpọrọ ““ How Brands Annoy Fans ”- gara n’ihu ikpughere na ihe ruru ọkara nke ndị zaghachiri gosiri na ha ga-echegharị ọzọ ịzụrụ ihe n’aka ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ha ga-agbachitere ngwaahịa ma ọ bụrụ na ha zutere mgbasa ozi nke ika ahụ na ọdịnaya dijitalụ mejọrọ ma ọ bụ kewapụrụ ha.
Trust pụtakwara dị ka isi okwu dị mkpa maka ndị na-azụ ahịa mgbe, n'agbanyeghị na ha na-ezipụ ozi mgbasa ozi nke abụọ, a na-ekwu na mgbasa ozi mmekọrịta dịkarịa ala tụkwasịrị obi na ntanetị mgbasa ozi ise kachasị elu. Imirikiti ndị na-azụ ahịa (63%) kwuru na ha na-azaghachi nke ọma na otu mgbasa ozi ahụ mgbe ha hụrụ ha na gburugburu mgbasa ozi siri ike ma tụkwasị obi. Iji zaa oku a maka ntụkwasị obi, ndị na-ere ahịa na-eme atụmatụ ịzaghachi site na ime ka ụkpụrụ nduzi ha na ụkpụrụ ha ga-akpụzi nhazi mgbasa ozi na-aga n'ihu.
Nchọpụta a sitere na CMO Council gosipụtara omume anyị mere dị ka nzukọ ahịa zuru ụwa ọnụ iji kpuchido akara anyị site na nsonaazụ ọjọọ metụtara ịzụ ahịa mmemme, "na-akọwa Suzi Watford, Onye isi oche Onye isi na Onye isi ahịa ahịa maka Akwụkwọ akụkọ Wall Street. Iji lụso egwu dị na okike mgbasa ozi dijitalụ, anyị ewetala atụmatụ mgbasa ozi na ịzụta ọrụ n'ụlọ iji jigide oge na ebe ndị ahịa na-ahụ ozi azụmahịa anyị. Nọgide na-enwe ntụkwasị obi na ntụkwasị obi bụ ihe kachasị mkpa na akara Dow Dow, anyị na-achọ itinye otu nyocha nke ọrụ anyị nke ndị nta akụkọ anyị na-eme na akụkọ ha.
Ndị ahịa na-agba mbọ ime ihe ziri ezi iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke ọnọdụ mgbasa ozi dijitalụ na itinye ya na gburugburu ọdịnaya nwere nchekwa ma nwee aha ọma, ha na-elekwa nke a anya dị ka onye ahịa ọhụụ. Isiokwu ndị CMO Council / Dow Jones nwere peeji 63 kpuchitere gụnyere:
Ọkwa nke onye ndu ahia na uche gbasara ọdịnaya mgbasa ozi dijitalụ
Atụmatụ na ebumnuche chebe ma kpuchido iguzosi ike n'ezi ihe na ọwa mgbasa ozi dijitalụ
Mkpa na uru nke ọdịnaya na ọwa iji gosipụta irè mgbasa ozi na izipu ozi
Uzo nke ihe ojoo ma obu nkwanye ugwu na ụdị ndị metụtara ọdịnaya na-adịghị mma
Omume na ọdịdị nke ika compromises na mmemme mgbasa ozi dijitalụ n'ịntanetị
Omume kachasị mma na-eru nso iji hụ iguzosi ike n'ezi ihe na mmemme ị zụta
Iji sayensị mgbasa ozi dijitalụ mepụta ka ukwuu ika nnabata na-aza ajụjụ
Ndị ahịa na azụmahịa echiche onye na-azụ ahịa na mmeghachi omume iji gosiputa ebe ozo di iche iche
Mmetụta na oke na nwale nke usoro mgbasa ozi, nhọrọ, itinye ego na ịzụrụ ihe
Ọkwa nke afọ ojuju site na iji mgbasa ozi dijitalụ rụọ ọrụ, akụnụba, arụmọrụ na nghọta
Nke a bụ ihe infographic si CMO Council, Oge erugo ikwu banyere ntụkwasị obi, nke na-ekwu maka mmetụta ntụkwasị obi na ịzụrụ ihe mmemme mmemme.
Tags: oke okead ịzụtanjikwa admgbasa ozi ịzụrụaha adteknụzụika nnabataika ahaasị asịwoọwadigital mgbasa oziike mgbasa ozimmemme mmemme zụtarammemme mmemmeaha
Ọkt 3, 2017 na 8:53 AM
Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-adọrọ mmasị - ọ bụ eziokwu na ọ na-ewe naanị otu agbaghara mgbasa ozi iji kewaa onye ọ bụla site na ika ahụ.